Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Santas dị ụkọ na US oge ekeresimesi a
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Entertainment • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
N'ụzọ doro anya, ndị na-eme ihe nkiri Santa Claus dị 10% n'afọ a, n'ihi na ụfọdụ anwụọla site na coronavirus na ndị ọzọ anaghị eme ihe omume n'ihi ọrịa COVID-19. Ọtụtụ ndị ahapụkwala ezumike n'egwuregwu Santa.
United States na-eche ụkọ nri ọzọ dị oke egwu ihu n'afọ a - ndị agadi nwoke nwere ajị agba dị ụkọ ma sie ike inweta oge ekeresimesi a.
Dabere na data ọhụrụ, enweela mmụba 121% nke ihe ndị US chọrọ Fada ekeresimesi na 2021 ma e jiri ya tụnyere afọ abụọ gara aga.
N'ihi mmụba dị nkọ na-achọsi ike, ọrụ Santa dị ihe karịrị 1,275 zuru oke (dịka ndị na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ahịa) yana ihe karịrị awa 2,000 Santa gigs ka na-ejupụta na US.
Ọrịa COVID-19 na-aga n'ihu nyekwara aka nke ukwuu na ụkọ ndị mmadụ dị na-arụ ọrụ Santa Claus.
N'ụzọ doro anya, enwere 10% ole na ole Fada ekeresimesi Ndị na-eme ihe nkiri n'afọ a, n'ihi na ụfọdụ anwụọla site na coronavirus na ndị ọzọ anaghị eme ihe omume n'ihi ọrịa COVID-19. Ọtụtụ ndị ahapụkwala ezumike n'egwuregwu Santa.
Dị ka 'National Santa' bụ onye pụtara na isi parades na dị ka Nna Christmas maka Mụaka maka Tots, ụfọdụ 18% nke Santas ibe ya na-ekwu na ha na-ewepụ afọ ahụ.
Ọtụtụ Santas na-eji COVID-19 na-egwu ya n'enweghị nsogbu, ebe ọ bụ na ha na-eme agadi na oke ibu.
Ụkọ ndị na-ebunye ihe ebelatawokwa ịdị adị nke uwe Santa.
Onye na-ekwuchitere ụlọ ọrụ Costumes maka Santa kwuru, "A ka nwere ọtụtụ ihe achọrọ ka dị n'oké osimiri n'ime akpa. "Ndị na-ere ahịa anyị enwetabeghị ngwaahịa ha site na China ... Ihe ndị kwesịrị ịbịa n'August na-abata ugbu a."